Dastabej » उच्च अदालत दिपायलको फैसलाप्रति पुर्बप्रधान मन्त्री डा. भट्राईको आक्रोस
उच्च अदालत दिपायलको फैसलाप्रति पुर्बप्रधान मन्त्री डा. भट्राईको आक्रोस – Dastabej
उच्च अदालत दिपायलको फैसलाप्रति पुर्बप्रधान मन्त्री डा. भट्राईको आक्रोस
रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला । तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मणलाई जन्मकैदको सजाय ।
नेपालगन्ज— टीकापुर घटनामा संलग्नको आरोपमा रेशमलाल चौधरी र लक्षण्मा चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि थरुहट पक्षका नेताहरु असन्तुष्टी जनाइका छन् । वरिष्ठ न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश सीताराम मण्डलको इजलासले बिहीबार उक्त फैसला गरेको हो । अदालतका फ्रसला आएलगत्तै पुर्बप्रधान मन्त्री तथा जनता समाजबादी पाटीैका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सन्जाल मार्फत असन्तुष्टी पोखेका छन् । उनले लेखेका छन्—सांसद रेशम चौधरी,लक्ष्मण थारू लगायतका नेपालको सम्भवत सबभन्दा पुरानो तर अत्यन्त उत्पीडित थारू जातिको मुक्ति अभियानमा लागेका नेताहरूलाई अदालतले पुन दोषी ठहर गर्नु अत्यन्त दुस्खद छ । झापाविद्रोह र जनयुद्धका नायकहरू सत्तासीन भएको वेला थारूविद्रोहको चाहिं अपराधीकरण हुनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक छ।
उत्पीडित थारू जातिको पहिचान र अधिकारको लडाइॅ एकदिन अवश्य विजयी हुनेछ। क्रान्तिकारी थारू नेताहरूलाई सलाम ।
त्यस्तै थारु अगुवा सुरेन्द्र चौधरीले पनि फैसला अघि नै सन्जालमा लेखेका छन्—हाम्रा पनि कपाल फुलिसके । अदालतले गर्ने निर्णये प्रकृया बारे सामान्य ज्ञान हामी पनि राख्छौं । न्यायमा पहूँच बाद्धद्धघ रे तालिम पनि गराउँदै हिंडियो कुनै समय । कम्तीमा मलाई कसैले भ्रमित गर्ने हिम्मत नगर्दा राम्रो। यदी बहस सकिएको हो भने फैसला आजै हुन्छ। दुई जना न्यायधिश हरुको बेन्चले फैसला गर्छ।बहस आज सकिने अनी फैसला भोली हुने भन्ने हुँदैन। दुइजना न्याएधीश हरुको बेन्चले फैसला सुनाउँछ धुक्क हुनुहोस् ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो । त्यही आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ । चार जनाको सजाय घटाएको छ । यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन् । सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो । उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा स्विकारेका थिए । घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकामा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको छ । विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ । रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो । करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको छ ।
३ पुष २०७७, शुक्रबार ०८:३४ प्रकाशित